TKMyanmarEnglish – TK
Myanmar English Group
TKMyanmarEnglish	News	November 29, 2019
မြန်မာ့ English စကားပြော Group မှာ ဆရာ ဒီနေ့အထိ တင်ပေးခဲ့သမျှကို စုပြီး PDF File လေးနဲ့ လုပ်ပေးထားပါတယ်။ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။ အားလုံး အင်္ဂလိပ်စာ တိုးတက်ကြပါစေ။ MyanmarEnglish_GroupDownload
TKMyanmarEnglish	Lessons	September 19, 2019
What, Whatever ! You’ve gotafriend. သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ရှိနေပါပြီး။ သင်ခန်းစာ တစ် နစ် သုံး ကို ကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်မှ ကြည့်ပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ အ ခြေခံမရှိသူများအတွက် တကယ်ကြိုးစားမယ်ဆို သုံးလ အတွင်း နေ့စဉ်သုံးစကား ပြောကိုရမယ်လို့ ကျ နော်ကယုံကြည်သူပါ။ သင်ခန်းစာ တစ်ခုမပိုင်သေးပဲ နောက်သင်ခန်းစာ တစ်ခုကို မ ကျော်သွားဖို့တော့အ ရေးကြီးပါတယ်။ Please use Burmese unicode fonts.
TKMyanmarEnglish	Lessons	September 16, 2019
Clauses/Phrases Monkey see, monkey do! မလုပ်ပါနဲ့ မြန်မာတို့ရဲ့ အတု မြင်အတတ်သင်ကို လုပ်ပါ။ သင်ခန်းစာ တစ် နစ် သုံး ကို ကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်မှ ကြည့်ပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ အ ခြေခံမရှိသူများအတွက် တကယ်ကြိုးစားမယ်ဆို သုံးလ အတွင်း နေ့စဉ်သုံးစကား ပြောကိုရမယ်လို့ ကျ နော်ကယုံကြည်သူပါ။ သင်ခန်းစာ တစ်ခုမပိုင်သေးပဲ နောက်သင်ခန်းစာ တစ်ခုကို မ ကျော်သွားဖို့တော့အ ရေးကြီးပါတယ်။ Please use Burmese unicode fonts.
TKMyanmarEnglish	Lessons	September 11, 2019
Inversion ပြောင်ပြန်ပြောပြီး ထိထိမိမိ ပြောဆိုခြင်း သင်ခန်းစာ တစ်ကနေ နှစ်ဆယ်ထိ လုံးဝ မပိုင်ပဲ ဒီသင်ခန်းစာကို မကြည့်ပါနှဲ့ခင်ဗျာ။ သင်ခန်းစာ နှစ်ဆယ်ထိ ကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်မှ ကြည့်ပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ အ ခြေခံမရှိသူများအတွက် တကယ်ကြိုးစားမယ်ဆို သုံးလ အတွင်း နေ့စဉ်သုံးစကား ပြောကိုရမယ်လို့ ကျ နော်ကယုံကြည်သူပါ။ သင်ခန်းစာ တစ်ခုမပိုင်သေးပဲ နောက်သင်ခန်းစာ တစ်ခုကို မ ကျော်သွားဖို့တော့အ ရေးကြီးပါတယ်။ Please use Burmese unicode fonts.
TKMyanmarEnglish	Lessons	August 26, 2019
Lesson 38. Grammar:9Parts of Speech စကားလုံး ဝေါဟာရ အနက် အဓိပ္ပါယ် ကိုးမျိုး။ သင်ခန်းစာ တစ်ကနေ နှစ်ဆယ်ထိ လုံးဝ မပိုင်ပဲ ဒီသင်ခန်းစာကို မကြည့်ပါနှဲ့ခင်ဗျာ။ သင်ခန်းစာ နှစ်ဆယ်ထိ ကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်မှ ကြည့်ပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ အ ခြေခံမရှိသူများအတွက် တကယ်ကြိုးစားမယ်ဆို သုံးလ အတွင်း နေ့စဉ်သုံးစကား ပြောကိုရမယ်လို့ ကျ နော်ကယုံကြည်သူပါ။ သင်ခန်းစာ တစ်ခုမပိုင်သေးပဲ နောက်သင်ခန်းစာ တစ်ခုကို မ ကျော်သွားဖို့တော့အ ရေးကြီးပါတယ်။ Please use Burmese unicode fonts.
အင်္ဂလိပ် အခြေခံ ဘာမှရှိဖို့မလိုပါ။ တကယ်လေ့လာ လိုက်လုပ် လေ့ကျင့်က သုံးလအတွင်းအကျိုးထူးမည်။
Myanmar English Group November 29, 2019
Lesson 41 September 19, 2019
Lesson 40 September 16, 2019
Lesson 39 September 11, 2019
Lesson 38 August 26, 2019
© 2022 TK | Proudly Developed by MZO.